-စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကို ဖမ်းဆီးပေးရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မှုခင်းရ… – PVTV Myanmar
-စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကို ဖမ်းဆီးပေးရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ (INTERPOL) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံ NUG ကအကြောင်းကြားစာပေးပို့ဆိုတဲ့သတင်း
-ထိုင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေ မြန်မာ့အရေးအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်မှာမဟုတ်တဲ့သတင်း
-အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ကို တည်ဆောက်သွားမယ်လို့
ပညာရေးဒု-ဝန်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်း အစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင် PVTV ရဲ့ ယနေ့ညနေပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်
Like – 4.5K Share – 454
2021-04-23 at 6:01 PM
2021-04-23 at 6:11 PM
Htet Myat Naung says:
2021-04-23 at 6:14 PM
Tv channel မှာရော လာလား?
Soe Linn Paing says:
2021-04-23 at 6:34 PM
Date လေးပြင်ပေးပါလား 23
2021-04-23 at 6:36 PM
2021-04-23 at 6:44 PM
2021-04-23 at 6:48 PM
2021-04-23 at 6:51 PM
Mee Mee Ktd says:
Akaung Ko says:
2021-04-23 at 7:05 PM
Date မှားနေလို့ သတိထားပေးစေခြင်ပါတယ် PVTV ရေ
2021-04-23 at 7:06 PM
2021-04-23 at 7:18 PM
2021-04-23 at 7:32 PM
Aung Myat Soe says:
2021-04-23 at 7:43 PM
Thi Aung says:
2021-04-23 at 7:58 PM
Very good sound system and vocal ability is great.
2021-04-23 at 8:31 PM
2021-04-23 at 8:32 PM
please help Myanmar people Interpol
2021-04-23 at 8:49 PM
ေအာင်ဆန်း ေငှး says:
2021-04-23 at 10:41 PM
မြန်မာပြည်မှာငြိမ်းချင်းမဲ့ဟာလွယ်လွယ်ေလးဘဲအေမရိကန်ေတွ EUေတွ R2Pေတွအားကုိးလဲအလကားသူတုိ့ဘယ်လုိမှလာမကူဘူးမြန်မာပြည်ကုိစာေရးမယ်ရူပ်ချမယ်စီးပွားေရးပိတ်မယ်ဒီေလာက်ဘဲရမယ်စစ်ေကာင်စီကဂရုကုိမစုိက်တာစစ်ေကာင်စီဆီကအာဏာပြင်ရမှာကလူေတွညီဖုိ့လုိတယ်လူေတွညီေအာင်လုပ်နူိင်တာလဲအခုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစုိးရကလုပ်နူိင်တယ်သူကတုိင်းရင်းသားေတွလုိချင်ေနတဲ့ဟာကုိေပးလုိက်မခွဲထွက်နဲ့ေပါ့မြန်မာေမြပုံကေအးလိုေပးလုိက်ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ပြီးရင်တုိင်းရင်းသားပြည်သူနဲ့တုိင်းရင်းစစ်တပ်ေတွနဲ့အကုန်လုံးေတာ်လှန်ဒါဆုိစစ်ေကာင်စီဘယ်နှစ်ရက်ခံနူိင်မှာလဲမြန်မာပြည်လဲေနာက်ဆုိအကုန်စစ်ပွဲရပ်သွားမယ်အစုိးရကပြည်သူေတွကုိနူိင်ေတာ့မယ်ဆုိတဲ့စကားလဲ့စားေနတာအမှန်ေတာ့သူေတွလဲအခတ်ခဲအများကြီးရှိတယ်နူိင်ငံြခားကုိအားကုိေနတယ်တုိင်းရင်းသားေတွကုိအားမကုိးဘူး
Elvis Nway Oo says:
2021-04-23 at 10:47 PM
2021-04-24 at 2:53 AM
2021-04-24 at 2:56 AM
2021-04-24 at 6:46 AM
ထိုင္းနိုင္ငံမွာလည္း ပရာယုကို ျပည္သူအမ်ားပိုင္းကလက္မခံဘူး၊၊သူလည္းဘဲ ဒုတိယ သိန္းစိန္၊မအလ ဘဲ
2021-04-24 at 11:40 AM
2021-04-24 at 2:35 PM
2021-04-24 at 5:50 PM
Try to find US military training.
တောင်ပေါ်သားလေး တောင်ပေါ်သားလေး says:
2021-04-27 at 12:25 PM